" ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေ ခေတ္တပျောက်ဆုံးတော့မယ့် ဆောင်းဝတ်ရည်မေ " - Cele Connections
” ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေ ခေတ္တပျောက်ဆုံးတော့မယ့် ဆောင်းဝတ်ရည်မေ “
kyaw | 01/11/2019 | Celebrity | No Comments
MRTV – (4)ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီလေး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဆောင်းဝတ်ရည်မေဟာ ” ဝိဉာဉ်ရှိုက်သံ”ဇာတ်လမ်းတွဲကစတင်ကာ ” ကြယ်စင်ချို” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးနဲ့ ပရိသတ်တွေစတင်သတိထားမိလာပြီး “ဝင်္ကပါစံအိမ် ” ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ” စောကလျာ ” ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင် အပြင် “အမုန်းမှသည်” ဇာတ်ကားမှာ” နေချိုသွေး”အဖြစ်ပရိသတ်တွေ အားပေးဝန်းရံခြင်းခံခဲ့ရသူပါ။ ထပ်မံပြီး “အချစ်သင်္ကေတ “ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ” ဖြူစင်ရှင်းသန့် ” ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာအပြင် “ချစ်ခြင်းတရားတို့ရှိရာ ” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သက်သက်ဇော်အဖြစ် ကာရိုက်တာမိစွာ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက ” သက်သက်ဇော်” အဖြစ် ဇာတ်လမ်းတွဲအမည်ကို တောင် တွဲဖက်ခေါ်ဝေါ်ရတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
ဆောင်းဝတ်ရည်မေ ကို ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေသာမက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးဝန်းရံကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသောအနုပညာရှင်တွေနဲ့မတူတဲ့ စကားပြောဟန်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကို ပိုသတိထားမိစေတာဖြစ်ပြီး ဖြူစင်တဲ့ ကလေးသဖွယ်အပြုံးလေးတွေကြောင့် နှစ်ခြိုက်သူတွေပိုများလာတာလို့ ဆိုရမှာပါ။ သူရဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေကလည်း သူရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်တွေကို အမြဲမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာလည်း ” အချစ်ဆစ်ဂနယ် “ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်လာသူဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက ဆောင်းဝတ်ရည်မေဟာ သူအရမ်းကိုစိတ်ပင်ပန်းးနေကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook အကောင့်ကို ဖျက်သွားခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ဆောင်းဝတ်ရည်မေအတွက်စိုးရိမ်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းဝတ်ရည်မေဟာ သူ့ရဲ့ Page ကနေ ဒီမနက်မှာပဲ ” ငါအဆင်ပြေပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုခဏနားချင်တာကြောင့် ဘာအတွက်နဲ့မှစိတ်မပူကြဖို့အပြင် ပရိသတ်တွေအတွက် အလုပ်တွေလုပ်နေဆဲပါ။ ” ဆိုပြီး English ဘာသာနဲ့ ပြောပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” I’m OK and don’t worry for me coz I just wanna break forawhile from Social Media . I’m still working for my fans Love you” ဆိုကာ သူ့ရဲ့ Page မှာ ဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေလျော့ပါးသွားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ CeleConnection ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော ဆောင်းဝတ်ရည်မေလေးအတွက် စိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေရှိလားဆိုတာ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Source : Hsaung Wutyee May
” ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါကနေ ခတ်ေတပြောကျဆုံးတော့မယျ့ ဆောငျးဝတျရညျမေ ”
MRTV – (4)ဇာတျလမျးတှဲမငျးသမီလေး တဈဦးဖွဈတဲ့ဆောငျးဝတျရညျမဟော ” ဝိဉာဉျရှိုကျသံ”ဇာတျလမျးတှဲကစတငျကာ ” ကွယျစငျခြို” ဆိုတဲ့ ဇာတျကောငျလေးနဲ့ ပရိသတျတှစေတငျသတိထားမိလာပွီး “ဝင်ျကပါစံအိမျ ” ရဲ့ဇာတျလမျးတှဲမှာ ” စောကလြာ ” ဆိုတဲ့ဇာတျကောငျ အပွငျ “အမုနျးမှသညျ” ဇာတျကားမှာ” နခြေိုသှေး”အဖွဈပရိသတျတှေ အားပေးဝနျးရံခွငျးခံခဲ့ရသူပါ။ ထပျမံပွီး “အခဈြသင်ျကတေ “ဇာတျလမျးတှဲမှာ ” ဖွူစငျရှငျးသနျ့ ” ဆိုတဲ့ ကာရိုကျတာအပွငျ “ခဈြခွငျးတရားတို့ရှိရာ ” ဇာတျလမျးတှဲမှာ သကျသကျဇျောအဖွဈ ကာရိုကျတာမိစှာ သရုပျဆောငျခကျြတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကေ ” သကျသကျဇျော” အဖွဈ ဇာတျလမျးတှဲအမညျကို တောငျ တှဲဖကျချေါဝျေါရတဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့သူတဈယောကျပါ။
ဆောငျးဝတျရညျမေ ကို ယောကျြားလေးပရိသတျတှသောမက မိနျးကလေးပရိသတျတှကေလညျး အားပေးဝနျးရံကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခွားသောအနုပညာရှငျတှနေဲ့မတူတဲ့ စကားပွောဟနျလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကေို ပိုသတိထားမိစတောဖွဈပွီး ဖွူစငျတဲ့ ကလေးသဖှယျအပွုံးလေးတှကွေောငျ့ နှဈခွိုကျသူတှပေိုမြားလာတာလို့ ဆိုရမှာပါ။ သူရဲ့ အမာခံပရိသတျတှကေလညျး သူရဲ့ဇာတျလမျးတှဲအသဈတှကေို အမွဲမြှျောလငျ့နကွေတာဖွဈပွီး လကျရှိမှာလညျး ” အခဈြဆဈဂနယျ “ဇာတျလမျးတှဲမှာ ပါဝငျထားပါသေးတယျ။
လကျရှိမှာလညျး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှော ပါဝငျလာသူဖွဈပွီး မကွာသေးမီက ဆောငျးဝတျရညျမဟော သူအရမျးကိုစိတျပငျပနျးးနကွေောငျး ရငျဖှငျ့ခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာ Facebook အကောငျ့ကို ဖကျြသှားခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ ဆောငျးဝတျရညျမအေတှကျစိုးရိမျခဲ့ကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆောငျးဝတျရညျမဟော သူ့ရဲ့ Page ကနေ ဒီမနကျမှာပဲ ” ငါအဆငျပွပေါတယျ။ ဆိုရှယျမီဒီယာကိုခဏနားခငျြတာကွောငျ့ ဘာအတှကျနဲ့မှစိတျမပူကွဖို့အပွငျ ပရိသတျတှအေတှကျ အလုပျတှလေုပျနဆေဲပါ။ ” ဆိုပွီး English ဘာသာနဲ့ ပွောပွခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ” I’m OK and don’t worry for me coz I just wanna break forawhile from Social Media . I’m still working for my fans Love you” ဆိုကာ သူ့ရဲ့ Page မှာ ဖျောပွခဲ့တာကွောငျ့ ခဈြတဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ စိုးရိမျမှုတှလြေော့ပါးသှားခဲ့ကွတယျလို့ဆိုရမှာပါ။ CeleConnection ပရိသတျကွီးထဲမှာရော ဆောငျးဝတျရညျမလေေးအတှကျ စိုးရိမျနတေဲ့သူတှရှေိလားဆိုတာ မှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။
” မို့ဖောက်ဖုထစ်နေတဲ့ ကြွက်သား​တွေကိုချပြကာသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောပြလိုက်တဲ့ ထူးအောင်”
” မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဟောင်းကို ပြကာ အနုပညာမောင်နှမတွေကို ဆေးအကြီးကြီးထိုးလိုက်တဲ့ ချောရတနာ “
“အိန္ဒိယမင်းသားလို့ ထင်မှားသွားလောက်စေမယ့် အိန္ဒိယအကကို တီးလုံးနှင့်အညီ ကျွမ်းကျင်စွာကပြလာတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်”
“နယ်မှာ ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးနေတာကြောင့် ပွဲတွေကို ငြင်းနေရတာကို နားလည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ခြူလေး”